Kulan lagu falan-qeeyay sidii magaalada Boorame looga hirgelin lahaa adeega dabdamiska | FooreNews
Home wararka Kulan lagu falan-qeeyay sidii magaalada Boorame looga hirgelin lahaa adeega dabdamiska
Kulan lagu falan-qeeyay sidii magaalada Boorame looga hirgelin lahaa adeega dabdamiska
fooreFeb 19, 2012wararka0
Boorame (Foore)- Kulan balaadhan oo lagaga hadlayay sidii adeegga Gaadiidka dab-damiska loogu heli lahaa magaaladda Boorame ayaa maanta lagu qabtay Huteelka Rays.
Kulankan oo ay ka soo qeyb galay shirkadaha Ganacsiga, aqoon-yahano, culimo iyo salaadiinta magaaladda Boorame.
C/raxmaan Axmed Obsiiye oo ka mid ah qaban-qaabiyeyaasha kulanka ayaa ka waramay baahida ay magaaladda Boorame u qabto inay hesho dab-damis si loo yareeyo khasaaraha iyo masiibadda ka dhalan karta dabka.
Waxa kale oo xusay in qiimaha dab-damisku yahay 50 kun oo doolar, waxa kale oo uu sheegay in loo baahan yahay in la sameeyo guddi loo xilsaaro hawshan.
Waxa kale oo kulankan ka hadlay Salaadiin ay ka mid yihiin Suldaan Ibraahim Dacar iyo Suldaan C/raxmaan Dhawal, waxayna ugu baaqeen shacabka Awdal iyo Salal in ay dal iyo dibadba iska kaashaadaan sidii loo heli lahaa dabdamis, waxaanay tilmaameen inay hirgelinta gaadiidka dab-damisku uu faa’iido weyn u leeyahay bulshada oo dhan.
Xoghayaha D/hoose ee demada Boorame Maxamed Cabdi Xaashi waxaanu sheegay in ay soo dhaweynayaan kulankan, waxa uu iftiimiyay in loo baahan yahay in la iska kaashado, isla markaana ay diyaar u yihiin dhankooda.
Xoghayuhu wuxuu ugu baaqay dadweynaha inay iska bixiyaan cashuuraha ku waajibay hantidooda, si maamulka Dawladda Hoose awood ugu yeesho inay fuliyaan adeegyada ay u hayaan bulshadda.
Sidoo kale, waxa halkaas ka hadlay Sh Xasan Daheeye oo ka mida culimada Diinta wuxuuna aad ugu dheeraaday in loo baahan yahay in la helo dabdamiska yaryar ee haamaha kooban ku jira, inta la helayo midka weyn ee Gaadhiga, waxa kale oo u soo jeediyay maamulka D/hoose in ay Kaalmaha ku amraan in ay aasaan Haamaha shiidaalka ku shubaan.
Kulankan ayaa la odhan karaa wuxuu ka dhashay ka dib markii ay dhawan kaalin shidaal ku gubatay magaalada Boorama ee loo waayay dabdamis bakhtiiya dabkii ka dhashay kaalintaas ku taalay magaalada Boorma.
Previous PostShirkaddii Qaran-express oo albaabadda loo xidhay markii ay musalaftay Next Post“Maxamuud Raage markii uu arkay dareenka laga qabo ayuu yidhi waan is casilay. waxaanu la yimid dhaqankii lagaga soo bedelay Cadaaladda”